सीमा लफडाको अहिलेको कारण मकैखेती « Loktantrapost
२४ बैशाख २०७७, बुधबार ०९:५८
मेचीनगर, २४ वैशाख । यो साता झापाको कचनकबल र झापा गाउँपालिकामा भारतीय पक्षले नेपाली सीमाभित्र घुस्न नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग जोरजुलुम गरेको दुईवटा घटना सार्वजनिक भए । दुबै घटनाले सीमा लफडाको अहिलेको कारण मकैखेती हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।
दुई दिन अघि झापाको झापा गाउँपालिका–४ सुकुम्बासी वस्तीमा उनीहरुले डेढ सयको घरेलु हतियारधारी जत्थासहित नेपाली सुरक्षा पोस्टमा आक्रमण प्रयास गरे । दिउँसो भएको सो आक्रमण प्रयासलाई विफल बनाउन नेपाली सुरक्षाकर्मीले संयमतापूर्वक दुई राउन्ड हवाई फायर गर्नुपर्यो । आत्मरक्षाका लागि अरु गोली चलेको भए नसोचेको दुर्घटना हुन सक्थ्यो ।
अर्को घटना अझ केही दिन अघि मात्र कचनकबल–४ खुट्टामनीमा भएको थियो । १५ जनाको जत्थामा आएका भारतीयहरुले नेपाली सीमाभित्र घुस्न निकै जोरजुलुम गरे । सामान्य भनाभन भयो । नेपाली सुरक्षाकर्मीले धपाउँदा उनीहरुमध्ये एकले हँसियाले प्रहार गर्दा एक जना प्रहरीलाई घाउ लागेको थियो ।
सीमा क्षेत्रमा एकपछि अर्को तनावपूर्ण घटना हुन थालेपछि मङ्गलवार झापा गाउँपालिकास्थित सीमाक्षेत्रमा बसेको दुवै देशको सुरक्षा निकाय, जनप्रनिधि र नागरिक समाजको संयुक्त बैठकमा भारतीय पक्षले माफी मागेको छ । तनाव नबढोस् भनेर भनेर नेपाली पक्षले माफी दियो । तर १४४ किलोमिटर लामो झापाको सीमा क्षेत्रमा त्यही प्रकृतिको घटना नदोहोरियला भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
तनावको मुख्य कारण मकैखेती
कोरोनाको कारण सीमा सिल भएको हुँदा अबदेखि नागरिकहरुले सीमा नाघ्ने धृष्टता नगर्ने र दुबै देशका सुरक्षाकर्मीले लकडाउनको पूर्ण पालना गराउने झापा बैठकमा सहमति भएको हो । तर त्यस बैठकमा तनावको गुदी कुरो सीमा क्षेत्रमा रहेको मकैखेतीका बारेमा कुनै निष्कर्ष निकालिएको छैन ।
झापासँगको १४४ किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्रमा उताका मान्छे यता आउने र यताका उता जाने कुरा लकडाउन अघिसम्म पँधेरोमा पानी भर्न गएजस्तै सजिलो थियो । कचनकबलको पिण्डलबारी, भद्रपुरको महेसपुर र मेचीनगरको सिसौडाँगीका नेपालीहरु भौगोलिक सुगमताका कारण पुरै भारततिर निर्भर छन् ।
त्यस्तैगरी, भारतीय नागरिकहरुले कचनकबल, गौरीगञ्ज र कुमरखोद–टाघनडुब्बामा नेपालतिरको जग्गामा आएर खेतीबाली लगाउने गरेका छन् । भद्रपुर र मेचीनगरमा समेत भारतीयहरुले नेपालतिर आएर खेती लगाउने पहिल्यैदेखिको चलन छ ।
अहिले विहारसँग जोडिएको कचनकबल, झापा र गौरीगञ्ज सीमा क्षेत्रमा मकै पाक्न थालिसकेको छ । लकडाउन सुरु हुँदा हुर्किदै गरेका थिए मकै । त्यसबेला खेतीवालाले सीमा आउजाउ गरेनन् । तर अहिले बाली थन्काउने बेलाको मकै चोरी होला कि वा खेर जाला कि भन्ने चिन्ता किसानहरुलाई देखिन्छ । उनीहरु कुनै हालतमा मकैबाली आफ्ना घरमा लैजान चाहन्छन् ।
कचनकबल र झापा गाउँपालिकामा भएका विवादका दुबै घटना मकैखेतीका कारण भएका हुन् । विगतमा सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मी हुँदैनथिए । भए पनि आकलझुकल मात्र देखिन्थे । अहिले इसारा गर्दा एकले अर्कोलाई बोलाउन सक्नेगरी नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु सीमानामा पर्खालसरी बाक्लै उभिएका छन् । हत्तपत्त सीमाबाट घुसपैठ सम्भव छैन ।
मेचीनगर–१५ को सिसौडाँगी र होप्नावस्तीमा मात्र होइन, भद्रपुरको महेसपुर र मेची पुलभन्दा मास्तिर समेत खरबुजा, आलु र पर्वल खेतीमा बाली उठाउन नेपाली पक्षले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट सकस भोग्नु परिरहेको छ ।
मकैबाली उठाउन दिए के होला ?
सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई खेतीबाली उठाउनका लागि सहजिकरण गरिदिन दुबैतिरका किसानको दवाव छ । वारि र पारि आफन्त छन् । कतै मिलेर खेती गरेका छन् । पाकेको बालीमा लुटपाट हुने डर छ । उनीहरुको वर्षभरिको कमाई नै त्यही हो । यिनै कारणले भौतिक दुरी कायम गरेर र सुरक्षा निकायको जानकारीमा मकैखेती उठाउन दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यसो भयो भने सीमामा किचलो नहुने सम्भावना पनि छ ।
तर सीमा खुकुल्याउँदाका बेफाइदा अनेक हुनसक्छन् । लागू औषधको कारोवारीले मकैबाली थन्काउने बहानामा धन्धा चलाउन सक्छन् । सीमा वारिपारि लकडाउनका कारण थुनिएका मानिसहरुले यही मौका छोप्न सक्छन् । भारततिरका मानिस ह्वार्रहवार्ती नेपालतिर लुक्न आउन पनि सक्छन् ।
त्योभन्दा खतरनाक कुरा के हो भने मकैबाली भित्र्याउन दिदा कोरोना सङ्क्रमण भित्रिदैन भन्ने कसले ग्यारेन्टी गर्ने ? केही दिनअघि बिन्जु मिडिया कर्नरले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा झापा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले अहिलेको अवस्था अरुबेलाको जस्तो नभएको हुँदा कोरोना फैलिनसक्ने जोखिम मोलेर सीमामा खुकुलो नीति लिन नसकिने स्पष्ट बताएका थिए ।